Ikhamera ye-Oppo Reno ye-10X zoom yekhamera ye-periscope idityaniswe kwividiyo | I-Androidsis
Ikhamera ye-Oppo Reno ye-10X zoom yekhamera ye-periscope idityaniswe kwividiyo
Iikhamera zePeriscope yenye yeendlela zokubonelela ngobude obude obugxile kwifom encinci ye-smartphone. Kodwa zisebenza njani? A ividiyo ebonisa ukuhla kwefayile ye Ikhamera ye-Oppo Reno inokukhanyisa ukukhanya malunga noko.
Kuyo sinokuthi sichaze izinto ezahlukeneyo zekhamera, njengoko beyiqhaqha ukuze babonakalise ubume bayo kwaye babone ukuba inyuka njani inkampani eza kuyiphumeza kuluhlu oluphezulu.
Imodyuli ye-periscope Amanyathelo kuphela angama-23.5 x 11.5 x 5.73mm. Incinci ngokwaneleyo ukuba ilingane kwiifowuni ngaphandle kokwenza i-hump enkulu. Incinci iyonke, ngenxa yoko ayithathi umthamo omkhulu wangaphakathi.
Imodyuli inamalungu amathathu aphambili: i-prism, iilensi kunye ne-sensor. Iilensi ziphuma njengeyunithi. Uyilo olukhethekileyo lwe- "D-Sika" olunceda ukugcina imodyuli icekeceke njengokuba injalo. Ikhoyili yemagneti ihambisa i-prism ukufezekisa ukuzinza komfanekiso.
Ikhamera ephambili ye-engile ebanzi nayo ine-OIS egxile kwinkqubo, kodwa olu luyilo lwesiko. Ungazibona zombini iinkqubo zozinzo ecaleni kwelinye ngo-2: 15 kwividiyo. Ezi khamera zimbini zinokusebenza kunye ukufezekisa i-10x hybrid zoom.
Singathanda ukubona iinyembezi zetafile ye- Ikhamera ye-Oppo Reno selfie: Ikhamera ezivelelayo ezinoyilo olwahlukileyo.
Kwelinye icala, kufanelekile ukuba ukhankanye loo nto i-terminal iya kusebenzisa iprosesa Qualcomm Snapdragon 855 ezingundoqo ezisibhozo, I-6 GB yememori ye-RAM-ubuncinci-, ukugcinwa okungekho ngaphantsi kwe-128 GB kunye nezinye izinto eziphezulu, njengebhetri enomthamo omkhulu ngenkxaso yetekhnoloji yokutshaja ngokukhawuleza yenkampani. Kungekudala sizakuqinisekisa zonke ezi nkcukacha kunye nokunye, kuba Oppo Reno uqalise iyasondela. Kuza kubakhona i Iinguqulelo ezahlukeneyo zemodeli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ikhamera ye-Oppo Reno ye-10X zoom yekhamera ye-periscope idityaniswe kwividiyo
Igosa: uthotho lwe-Samsung S10 ye-Samsung iya kufumana i-25W inkxaso yokutshaja ngokukhawuleza
Kukho i-OnePlus 6T ene-5G